FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SAINT SHEPHERD - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Saint Shepherd
Alika mpihetsiketsika mifangaro i Saint Bernard / mpiandry alemanina
'Alika lehibe i Max. Izy dia mifangaro Saint Bernard / Shepherd Alemanina, aseho eto amin'ny faha-4 taonany. Kamo be izy. Tsy mankafy fanatanjahan-tena izy, manana toetra tena tsara izy, ary tsara tarehy tanteraka ankizy sy ny hafa alika . Tena sariaka be izy satria mieritreritra ny hilalao azy daholo ny olona ary mihazakazaka amin'izy ireo izy. Noho ny haben'ny habeny dia matetika ny olona no manahy sao ho ratsy toetra izy, fa tsy marina aminy mihitsy. '
Ny alika mpiandry ondry dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Saint Bernard ary ny Mpiandry Alemanina . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Manana adala 5 minitra i Max rehefa mihodikodina sy mihodinkodina ary toa mahatsikaiky be izy satria manana ny jowl St Bernard misosa sy misidina rehefa mihazakazaka izy ary miseho ny nifiny (toa an'i Hooch avy any Turner sy Hooch) ary milelalela ny lelany ary midina koa. '
'Tia matory i Max, matory 22 ora isan'andro izy raha avela ary misakafo mandritra ny adiny roa hafa. Tsy avelako hihinana mihoatra ny fetra isan'andro izy satria tsy te-hanery ny rantsam-batana sy ny tonon-taolana ary ny fony sns. Angano izany fa tsy maintsy mihinana sakafo hariva lehibe ny alika be. '
'Max dia be fitiavana, sariaka, adala ary milalao. Nentiko tany amin'ny toeram-pialofana izy. Efa 7 volana izy no tao ary nanana trano 4 talohan'ny nandraisako azy. Nilaza ny tompona teo aloha fa lehibe sy be tabataba izy, inona no antenain'izy ireo amin'ny alika mitovy habe aminy? Tsy azonao atao ny mahita ireo toetra mpiandry alemanina ao aminy manaiky ny fandokoany. '
'Mihoatra lavitra ny fomba itondrako azy, esoriko indray mandeha isam-bolana izy ary esoriko isan'andro mba hanesorana ny volo antitra / maty ary hitazomana azy ho madio satria saika tsy azo atao ny mampiditra azy ao amin'ny fandroana.'
'Diablo ity. Ny reniny dia alika mpiandry alemanina malaso ary ny raim-pianakaviana Smooth Coat Saint Bernard. Izy no alika kely be fitiavana indrindra hatramin'izay. Vao 4 volana izy tamin'ity sary ity ary efa milanja 52 pounds. '
Diablo the Saint Shepherd toy ny alika kely amin'ny 5 herinandro
Wally the Saint Bernard / German Shepherd dia mifangaro amin'ny 4 taona eo ho eo mitsambikimbikina kilalao. Vakio ny tantaran'i Wally
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny mpiandry ondry masina
Sary mpihetsiketsika alika mpiandry ondry 1
dachshund jack Russell mampifangaro alika kely
alika omby aostraliana sy fifangaroan'ny terrier
sarin'ireo dihy lehibe mainty
fotsy sy tan shih tzu